I-Baztán Trilogy, ubugcisa bukaDolores Redondo. | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zeBaztán Trilogy.
I-Baztán Trilogy luthotho lwantlandlolo ngumbhali waseBasque uDolores Redondo Meira. Umbhali waphefumulelwa ziindawo ezikwingingqi yakhe yemvelaphi ukudala umsebenzi wakhe wokungcwalisa, ojikeleze ukubulala okungaqondakaliyo kwindawo ezimnyama ezilayishwe ngeembekiselo zeentsomi. Umlingisi ophambili, u-Amaia Salazar, ngummeli ophetheyo ekusombululeni iimeko ezinzima, apho ukubonakala kuhlala kukhohlisa. Hi ndlela leyi, umsebenzi kaDolores Redondo ubulungile kangangokuba Amaia aphakathi kwabacuphi abasetha imeko ngoku kwihlabathi.
Uphengululo olufunyenweyo luye- ubukhulu becala- luhle kakhulu; bafanelekele i-trilogy njengomsebenzi ongumzekelo kuhlobo lwenoveli yolwaphulo-mthethoOku kungenxa yeenkcukacha zeenkqubo zamapolisa ezichaziweyo. Ngokwengxelo yephephandaba El Mundo, «Intili yaseBaztán kunye nekomkhulu layo, i-Elizondo, zahlukile okoko iDonostiarra yasungula ubugqwirha bayo ngendlela yoncwadi olunoncwadi oluqale ngalo Umgcini ongabonakaliyo kwaye oko kubambe ngaphezulu kwabafundi abangama-700.000. Akumangalisi ukuba sele kukho ifilimu ekhutshwe kwi-2017 (ekhokelwa nguGonzález Molina) malunga nesahluko sokuqala se-saga kunye nokuqhubeka okulindelweyo kulindelwe.
1 Umgcini ongabonakaliyo
2 Ilifa emathanjeni
3 Ukunikezela kwisaqhwithi
Umgcini ongabonakaliyo ...
Kukhutshwa ngo-2013, sisiqendu sokuqala se- I-Baztán Trilogy, Ezitsala abafundi kwiphepha lokuqala Ndiyabulela kwiindawo zayo ezigcwele iimfihlakalo kunye neentsomi zeBaztán Valley, apho amatyala okusombulula aqhubeka khona. Yindawo eyodwa yokuhlala abantu namhlanje abasakholelwa kubukho beentsomi. Phakathi kwabo, uBasajaun, umlinganiswa okhuselayo wamahlathi ochazwe ngobuchule nguDolores Redondo.
Into enomdla kukuba enkosi kolu ngcelele lweencwadi, uDolores Redondo ukwazile ukubeka iBaztán phakathi kwenye ezona ndawo zibalaseleyo eSpain ezibonakala kuncwadi.
Njengokuba iziganeko zisenzeka, umbhali wazisa ngokuthe ngcembe umbono wokuba kunokwenzeka kweziganeko ezinxulunyaniswa nezinto eziqhelekileyo. Ngale ndlela, ukwazi kunye nomdla wokwazi ukukhula kweziganeko kuyanda. Zisuka nje, umfundi wothuswa kukufunyanwa kwesidumbu seze ze intombazana ekwishumi elivisayo ibekwe kwindawo embi kwindawo ekufutshane noMlambo iBaztán.
Nangona kunjalo, ulwaphulo-mthetho lubonakala ngathi alunakwa; inyanga ngaphambi kokuba kwenzeke enye intombazana (ngokucacileyo kwiimeko ezinxulumene noko). Emva koko, umhloli wokubulala u-Amaia Salazar uza kusebenza, othatha uxanduva lophando nangona ebuyele kwilizwe lakhe (indawo apho ebehlala efuna ukubaleka).
Impixano yangaphakathi ye-protagonist inxulumene ngokuhambelana nokutyhilwa kophando olunzima. Isakhiwo sibonisa imifanekiso yexesha elidlulileyo lika-Amaia, ngokukodwa ngo-1989, ixesha lobuntwana bakhe. Ukubandezeleka okungaphaya komntwana kubuchaphazela ubudlelwane bakhe nomyeni wakhe uJames kunye nosapho olusondeleyo, abenziwe ngoodadewabo uFlora noRos, kunye nomakazi wakhe u-Engrasi.
UDolores Redondo ugqithisa ngokugqibeleleyo imvakalelo yokusola ngokusisigxina kumlinganiswa ngamnye omtsha ovelayo. Kwangelo xesha, iimpawu zodade wabo no-anti ka-Amaia banegalelo elibalulekileyo ekufumaneni imibuzo kwityala. Ke ngoko, uxinzelelo kunye nokungaqiniseki kuhlala kude kube sekupheleni.
Kule ncwadi akunakwenzeka ukuba ungashiyi bucala imiba ethile ngokukaThixo, kwaye akukho mbhali ubalekayo kuyo.. Inye into eqinisekileyo, uDolores Redondo wayephila ebuntwaneni etyebile kwiintsomi, imeko eyathi yatyebisa ukucinga kwakhe kwaye yabangela lo msebenzi wobugcisa.
Umthamo wesibini we I-Baztán trilogy (2013) ngumxube odidayo phakathi kobuhle bokwenyani nenkohlakalo. Umsebenzi usinika ubuntununtunu bomama omtsha kunye nobumnandi bakhe, kunye noburharha obukhulu obunokufezekiswa ngabantu xa belawulwa bububi nokubawa.
Le ndibaniselwano inokukhokelela kuxinzelelo-nditsho nokuphazamisa-amanqaku abafundi abafileyo, ngenxa yesantya sokungakhathali esenziwe ngumbhali uDolores Redondo. Ewe kunjalo, akukho kunqongophala kweemeko eziyimfihlakalo ngaphandle kwengcaciso ebonakalayo, njengoko iimpendulo zikhomba kwiintsomi ezintsha zeentsomi zaseBasque. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuphathwa kwala mabali athandwayo ngumbhali kubonisa uphando olunzulu kunye nokuzinikezela ngokupheleleyo emsebenzini wakhe.
Zonke ezi zinto zenza Ilifa emathanjeni kwincwadi kakhulu umlutha, ngaphandle kokudinwa okudluliswe nguMhloli u-Amaia Salazar kunye nokukhawuleza okungxamisekileyo okuyimfuneko ukuqhubela phambili uphando. Oku kungxama kuya ngqo kungqubano neengxaki zomama ophambili, ophumeleleyo kwakhona ngokukhumbula imicimbi ebalulekileyo kwixesha lakhe elidlulileyo.
Imifanekiso ekhutshiweyo iyakhanyisa ngokuziphatha okungachazwanga kukatata ka-Amaia kwi Umgcini ongabonakaliyo, oku kuyakukhulula ezona nkcukacha zinabafundi. En Ilifa emathanjeni Iqinisekisa ukudibana kwamandla kunye nezinto ezingaphaya kwendalo kubomi bomhloli.
Emva kwayo yonke loo nto, kwasekuqaleni komlingo we-trilogy ibiyinto eqhelekileyo ebalini. Nokuba ku Iziphumo zayo zinokushiya ngaphezulu komfundi omnye (...kuba umlinganiswa ophambili akakhankanywanga ngokuthe ngqo de kube maphepha okugqibela encwadi), kufanelekile ukuba kufundwe, ngokulula, ngumsebenzi wobugcisa.
Emva kokusombulula ukusweleka okulusizi kwimeko yeBajajaun kunyaka ophelileyo, Umhloli u-Amaia Salazar ubonakala ekhulelwe kwityala lolwaphulo-mthetho, uJason Medina, ukuze anike ubungqina nobungqina. Kodwa oku akwenzeki.
Ityala linqunyanyisiwe ngenxa yokuzibulala kukaMedina kwigumbi lokuhlambela lenkundla, eshiya inqaku kuSalazar kunye nombhalo othi "Tarttalo", ilivo elenza iyelenqe lokubulala kunye noloyiko kwi-Baztán Valley. Ngumntu wasentsomini ofana noo-Cyclops abagquma abantu abanxanelwe igazi, abanokutya abantu kunye nokungoneliseki.
Okulandelayo, kukho ubudlelwane phakathi kokuzibulala kweMedina kunye namanye amatyala okuzibulala kwamadoda ababulali abo banqumla iingalo zabafazi babo ababuleweyo. Kwangelo xesha, uSalazar kunye nabasebenzisana nabo kufuneka baphande ukungcola okungaqhelekanga kunye nezithethe ezingaqhelekanga ezinamathambo abantwana awenzeka kwicawa yaseArizkun. Le mifanekiso inegazi iphindaphindwe kulo lonke iyelenqe. Umbhali uzibeke ngononophelo ukuze abe nefuthe kumfundi ngexesha elifanelekileyo kwaye amshiye encamathele ebalini, elinde ngaphezulu.
Oko ekuqaleni kubonakala ngathi zincinci, azibalulekanga emathanjeni, ziyahambelana nokuzalwa kunye nokuba ngumntwana komhloli. Ukongeza, akanakunikezela ngokupheleleyo kuphando, oku kungenxa yokuba ngumama kutshanje. Uloyiko lokusilela njengomama, kunye neengxaki kubudlelwane bakhe nomyeni wakhe, zonyusa uxinzelelo ku-Amaia. Uzisiwe ngokungagungqiyo kuvuthondaba kunye nokuphela okukhawulezayo okushukumisa imithambo-luvo yomfundi ongaphezulu koyedwa onamava.
Ukunikezela kwisaqhwithi ...
Lo msebenzi udwelisiwe kwizibuko ezininzi ezinikezelwe kuphononongo loncwadi njengokuvalwa okugqibeleleyo I-Baztán trilogy. Kunye Ukunikezela kwisaqhwithi, UDolores Redondo ngokumangalisayo ulawula ukudibanisa ulwaphulo-mthetho lwe Umgcini ongabonakaliyo y Ilifa emathanjeni. Umbhali ngobuciko unika isisombululo esichanekileyo sayo yonke imfihlelo, uloyiko kunye neentsomi ezenzeka kwi-Baztán Valley.
Kwangokunjalo, uMhloli u-Amaia Salazar uboniswa nazo zonke iziphene kunye nokuziphatha okuhle, ngaphandle kweemeko eziyinyani. I-Dolores Redondo iqukumbela ukuvela kwabo bonke abalinganiswa abalulekileyo be-trilogy ngendlela ebalaseleyo. Olu nyango lunikwe ilungu ngalinye lesakhiwo ngumbhali lifanelwe kukudunyiswa. Umbhali uyazi nzulu kuyo yonke inkalo, yonke ingcinga kunye nokuziphatha kwezinto endizenzayo, ukuya kwinqanaba lokuba zenziwe zithembeke kwaye zibenokubonakala.
Oku kwenzeka kwinyanga enye emva kweziganeko ze Ilifa emathanjeni. Amaia uyaqhubeka nokukrokrela ukuba uRosario (omnye wabaqulunqa iyelenqe lesibini le-trilogy) usaphila. Konke oku ngaphandle kwento yokuba uMgwebi uMarkina kunye nomyeni wakhe bathi usweleke kwesaqhwithi. Intshukumo iqala xa uBerasategui (umbulali owazibiza njengoTarttalo) esweleka ngaphandle kwesizathu kwisisele sakhe.
USalazar uphanda ukusweleka kweentsana ezininzi zabantu ezibangelwe yidemon uInguma. Esi sisiseko esikhubaza abantwana abaleleyo kwaye sifunxe ubomi babo ngokuphefumla kwabo. Nangona kunjalo, njengakwizavenge ezibini zokuqala, imvelaphi yokufa okungummangaliso ngumntu wenyama negazi. Nangona kunjalo, indlela ephucukileyo apho uDolores Redondo asibalisela iyelenqe yenza nawuphina umfundi athandabuze. Ngokulula uqinisekisa ngaphezu kwesinye ukuba kukho into enjalo yeedemon.
UDolores Redondo ngeMbasa yePlaneta.
Ukusonjululwa kwetyala kuyakuthatha uSalazar ezantsi ngendlela egcwele izothuso, ngelixa ebonisa elona cala lililo kunye nobuntu lomntu ophambili. Xa kufunyanwa isazisi esingalindelekanga esabangela ukuvela kwezinto ezoyikisayo zeBaztán Valley, abafundi abaninzi sele becacile malunga nomrhanelwa ophambili.
Ukuphela kwetrilogy kushiya abanye abantu bedanile ngenxa yomlinganiswa ophambili ngenxa yokuthandana kwakhe. Okwangoku, phantse akunakwenzeka ukuba abafundi bangavelani naye. UDolores Redondo wakhankanya kudliwanondlebe nesikhululo sikamabonwakude sangaphakathi ngo-2016 ukuba uAmaia Salazar angabuya kwixesha elizayo. Umbhali uphawule wathi: "Nangona kungekuko ngokukhawuleza njengoko abanye befuna." Kuya kufuneka silinde ngexhala ukubuya kwalo mlinganiso umangalisayo kunye nobuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » I-Baztán Trilogy
UAna laura mendoza sitsho
Ndisandula ukufumanisa le trilogy kwaye ndiyayithanda. Ndabona imovie kwiNetflix kwaye ndaqala ukuphanda, ndiyafa ukuqala ukufunda iincwadi, ndivela eChihuahua, eMexico, ke ndiyathemba ukuba ndizifumene.
Ndiyaluthanda olu hlaziyo. Ndiyabulisa !!
Phendula uAna Laura Mendoza
Iza kuba nini inxenye yesine yale ¨triology¨? Kuba kwinxalenye yesithathu, phantse esiphelweni: Ngubani ofowunele unesi emnxebeni emxelela ukuba asike intamo yakhe?
Uhlobo lwenkcubeko: Ngaba lukhona uncwadi lwabasetyhini? Kwaye indoda?